Maamulka Gobolka Banaadir oo ka laabtay amarkii ahaa in lacag la’aan lagu galo Beerta Nabada – Hornafrik Media Network
Maamulka Gobolka Banaadir oo ka laabtay amarkii ahaa in lacag la’aan lagu galo Beerta Nabada
By HornAfrik	 On Jul 12, 2017
Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Banaadir, Maluuka Xaaji Dheere ayaa saxaafada u sheegtay in laga laabtay amarkii hore u soo baxay, isla markaana Maamulka Gobolka iyo Ganacsatada Beerta ay kulan yeesheen.
“Markii aan falanqeynay waxyaabaha ku saabsan qiimaha lagu galo beerta waxaa isla galaran in beerta shaqadeeda ku soo noqoto, in wixii hada ka dambeeya dadka laga qaado $1, si qof kasta oo muwaadin ah uu ugu nasto beerta”ayay tiri Maluuka Xaaji Dheere.
Waxaa ay sheegtay in sidoo kale Ganacsatada beerta ay isku afgarteen in Ciidaha iyo Maalmaha kale laga qaado Dadwaynaha Lacago Isku mid ah. waxayna intaa ku dartay in Caruurta iyo Dadka kale si isku Mid ah iyagana looga qaadayo 1 Dollar.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa amaro uu dhowaan soo saaray aanu dhaqan gelin, sida amarkii ay Gaadiidka AMISOM kaga joojiyeen Wadada Maka Al-Mukarama inay isticmaalaan 6-da subaxnimo illaa habeenkii Saqda Dhexe.
Ammaanka Xarunta Baarlamaanka Somalia oo si wayn loo adkeeyay xilli ay Maanta leeyihiin Fadhigoodii ugu horeeyay Golaha Shacabka.
Wasiirka Maaliyadda oo u gudbiyay Golaha Shacabka Miisaaniyadda Dowladda ee 2017-ka “SAWIRRO”